Canle Kindle Books ma siin kartaa daaqad kale oo dakhliga kale ee blogeri?
Dhammaadkii bishii Juun, ProBlogger ayaa sheegay Steve Scott wuxuu sameynayaa $ 30,000 bishiiba kaliya ka soo buugaagta Kindle.
Bishii Abriil, Forbes ayaa ka warbixisay qoraaga iskiis u sameeyay Mark Dawson. Dawson wuxuu qoraa buugaag vosak ku qori kara dambiyada. Laakiin, taasi maahan sheekada dhabta ah halkan. Wuu sameeyaa 450.000 $ sano ah buugaagtaas.
Waxaa jira qorayaal kale oo badan oo ka yimaada meelo dhowr ah oo bil walba ah illaa dhowr kun oo doolar bishii. Iyada oo sahlanaanta daabacaadda buuga elektarooniga ah ee Amazon, waa hubaal aagagga ay kuwa doonaya u ay galaan boggooda waa u ay egaan.
1 Socda Dakhliga
2 Khasab kuguma aha inaad Buug qorto
3 Buug cajiib ah
4 Sidee loo Baddalaa Buuggaaga
5 Ku soo qaado Amazon
U kasta oo aadan awood u yeelan karin inaad je imao iyo jeer saadaaliso intaad ku sameyn laheyd boqortooyooyinka, mid ka mid ah furayaasha si aad lacag ugu uruuriso bartaada blogka ayaa ah inaad abuurto durdurro badla ooga dali dahhuloloangaan daan dali dahhuloooo daan dali dahlolo huao dau dahhlolo huao ooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhl.
Buugagtu waa dakhli hadhaaga ah. Buugga hal mar ayaad qoraysaa, waadna sameyneysaa, gelineysaa, waxayna lacag kuu dhiganeysaa illaa iyo inta la iibinayo. In kasta oo ay waxyar ka sii badan tahay (waxaad u baahan doontaa inaad ugu yaraan marmarka qaarkood dhiirrigeliso buugga), taasi waa aasaaska aasaasiga ah.
Khasab kuguma aha inaad Buug qorto
Mid ka mid ah waxyaabaha quruxda badan ee ku saabsan barta blogka waa inaad bilaabi doontaa inaad ururiso waxyaabo badan oo waqti ka badan. Waxaad si sahlan u bilaabi kartaa u aad kala soocdo sheekooyinka ku jira qaybaha oo ay ku wada xidhaan hagayaal iyo buugaag.
Dooro mowduuc. Tusaale ahaan, haddii aan rabay inaan xiro qaar ka mid ah fariimahayga ku yaal Guriga Caruurta, waxaan dooran karaa mawduuca "Macmacaanka bez glutena". Waxaan markaa ka raadin karaa koobab ku saabsan qaybtaas, fiiri waxa soo baxay, oo laga yaabo inuu ku daro dhowr ka mid ah kuwa u gaarka ah iyo talooyin qaar akhristayaasha oo ku dhejiya buug loogu talagalay.
Ka dhig mawduuc balaadhan. Haddii aad rabto buug weyn, waxaad dooran kartaa mawduuc balaadhan. Tusaale ahaan, haddii Jerry doonayo, wuxuu abuuri karaa buug loogu talagalay WHSR "Talooyinka qoraalka ee loogu talagalay dadka cusub". Wuxuu horey u leeyahay hage weyn si uu u bilaabo aasaaska buugiisa. Wuxuu markaa kaftamayaa marwalba qoraallada loogu talagalay talooyinka ugu muhiimsan oo ay wadaagaan.
Ka faa’iidaysiga dardargalinta isdhaafsiga. Blogkaagu waa inuu ahaadaa waddo laba dhinac ah. Waxaad kor u qaadi doontaa buugaag aadna u diri kartaa gaadiidka Amazon si aad u iibsato nuqul. Kuwa buuggaaga ku qoran Amazon waxay akhrinayaan waana in ay helaan xiriirka iyo booqdaan bartaada.
Buug cajiib ah
Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad bixiso buug gaar ah, waxaad mararka qaarkood qabsan kartaa niche in qofna uusan horay u qorin iyo inuu helo dhageystayaal cusub labadaba buugtaada iyo bloggaaga.
Waqti ku bixi inaad ku baarto buugaagta la heli karo ee mawduucaaga ah. Maxaa aan la daboolin? Maxaad ku dari lahayd?
Waxaad sidoo kale qaadan kartaa su’aalaha akhristayaasha ee ku yaala goobta oo isticmaal su’aalahan fikrad ahaan si aad u qorto buug cusub.
Ka feker waxa kugu soo galey mawduuca. Ma jiraa sheeko halkaa looga sheego?
Isu soo ururi kiisaska daraasad ee kuwa kale ee warshadaha oo la wadaagaan macluumaadka buugga.
Hubi inaad isticmaashid qoraal wanaagsan Qabso xiisaha akhristaha. Waxaad doonaysaa u akhristayaashu soo noqdaan oo ay soo iibsadaan buugaga soo socda.
Waxaad u baahan doontaa inaad sameyso xisaab si aad ugu daabacdo Kindle na Amazonu. Hase yeeshee, furashada xisaabtu waa bilaash.
Sidee loo Baddalaa Buuggaaga
Marka ay timaado ebooks, qaabka ugu fudud ayaa ka sii fiican. Isku dan inaad ku dhejiso font aasaaska ah oo ka fogow vosak kasta oo wata qoraal ama muuqaallo. Haa, xitaa cinwaanka. Kaliya je imao ier je tarjunto si fiican qaab ebook ah.
Xulo labo isugeyn laba jibbaar leh ama mid iskustva mid ah labo boos oo u dhexeeya cutubyada.
Ilaa aad qoreysid buug carruurta, iskuday inaad ku dhejiso qoraalka. Marka hore, haddii aad dooratid ikhtiyaarka 70% ee daqligaaga (inbadan oo ku saabsan tan daqiiqad gudaheed), waxaa lagugu soo dallaci doonaa sida buuggaagu u weyn yahay. Sawirraduhu wey sii ballacayaan faylka.
Amazon waxay bixisaa tilmaamo laguugu socdo iyada oo loo marayo geedi socodka buuggaaga loogu talagalay Kindle. Waxaa lagu magacaabaa Dhisidda Buuggaaga Xajka.
Waxaad iska diiwaangelin kartaa KDP bilaash, laakiin waa inaad bixisaa macluumaad shakhsi ahaaneed ujeedooyin canshuureed iyo inaad hesho lacag.
Ku soo qaado Amazon
Također možete koristiti oznaku Internetka i dodavati Kindle Direct (KDP)
Dhammaadkii bishii Juun, ProBlogger ayaa sheegay Steve Scott wuxuu sameynayaa 30000 $ bishiiba kaliya
Dhammaadkii bishii Juun, ProBlogger dan Steve Steve wuxuu sameynayaa $ 30.000 bishiiba kaliya ka
Dhammaadkii bishii Juun, ProBlogger ან Sheegay Steve Scott wuxuu Sameynayaa $ 30,000 $ bishiiba
Dhammaadkii bishii Juun, ProBlogger ayaa sheegay Steve Scott wuxuu sameynayaa 30.000 $ bishiiba kaliya
Libri Kindle Canle ma siin kartaa daaqad kale oo dakhliga kale ee blogger?
Dhammaadkii bishii Juun, ProBlogger ayaa sheegay Steve Scott wuxuu sameynayaa $ 30,000 bishiiba kaliya
Dhammaadkii bishii Juun، ProBlogger ayaa sheegay Steve Scott wuxuu Sameynayaa 30،000 $ bishiiba kaliya
Cas Pop Sensation Taylor Swift Muaj Qhia Koj Txog Khiav Hauj Lwm Ib Zaug დღიური
Πώς μπορείτε να ορίσετε μια προεπιλεγμένη επιλεγμένη εικόνα στο WordPress;
Jednostavan i bezbolan vodič za dodavanje Google karte u WordPress
7 taktika a blogolvasók konvertálására fizető ügyfelekre
49 Podatci koji dokazuju podatke o tome kako dobiti više tweetova
Kamoo blogg bloggið þitt og WordPress
केस स्टडीज: वेबसाइट रूपांतरण दरों को बढ़ाने के 20 तरीके
כיצד להרוויח בלוגים של כסף: להיות סוקר מוצר
Ufänger სახელმძღვანელო: Wat ass Webhosting? Wat ass eng Domain? Domain Numm ვებ ჰოსტინგი
वैक्सायबाह आड का बरन कार्तिद कोरोलाडा वैम्पायर इ कू कूब्सन इललिंटा एखरिस्तयाशा
Töltse le a HTML szöveget a Dumniya háttérképhez
Έξυπνο Twitter Bios που θα σας κάνει να πάει Oooh και Aahh
24 sosiaalisen median markkinoijien ja bloggaajien kultaiset säännöt
Cattura l’interesse del tuo lettore come uno sceneggiatore di Hollywood
Parhaat blogikäytännöt voittoa tavoittelemattomille blogeille
Hébergement Web Alius est autem quam Movere tuum (et cum se scire artem)
7 שיעורים שלמדתי במהלך השנה הראשונה לבלוגים
25 Nggantheng Web Aman შრიფტები Kanggo ვებსაიტზე Sampeyan
Kif Ibda Blog Oħra uspješan, Parti 2: Promozzjoni u Monetizzazzjoni
15 تم زیبا وردپرس pou salon bote ak spa
U Etsa Joang Sebaka sa Couponte ka WordPress?
Mis Wikipedia er ekki eins og Veebimajutusest
نحوه بهبود نرخ تبدیل سایت شما: نکات سریع + مطالعات موردی
ექსპერტი ინტერვიუ: დები ბუკსტაბერი, თუ როგორ ეხმარება საზოგადოება სიკეთეს ბლოგერებს
Hvernig á að búa til morðingja um síðu
როგორ მუშაობს ვიკიპედია?
مصاحبه میزبان وب: پرسش و پاسخ با مدیر عامل CloudAccess.net جاناتان گافیل
W3 Tapeke Kaeka Tae – Minun on oltava Tautuhinga Whānui
7 avantages du blogging et comment y parvenir en 2016
როგორ გამოვაქვეყნოთ თქვენი წიგნი # 4: თქვენი წიგნის შედგენა და ჩამოყალიბება